Fiitatry ny isam-ponina - Wikipedia
Fiitatry ny isam-ponina
Ny atao hoe fiitatry ny isan'ny mponina na fiitatra demografika dia midika ny fiovan'ny isan'ny mponina arakaraky ny fotoana isiana.
Ny fiitatry ny isan'ny mponina dia voazara ho fizarana roa :
Ny voalohany dia ny fiitatra natoraly ; miankina amin'ny isan'ny olona teraka sy ny isan'ny olona maty isaky ny mponina arivo ao anatin'ny velarantany nofaritana ary anatin'ny fe-potoana iray (matetika herintaona no ampiasaina).
Ny faharoa dia ny fiitatra noho ny fifindra-monina ; miankina amin'ny fiitatra natoraly sy ny isan'ny mponina tonga ao anatin'ny velarantany nofaritana ary ao anatin'ny fe-potoana iray.
Raha miiba ny tambatr'ireo fiitatra roa irao. Mihena ny isam-ponina. Mety tsy mitombo mihitsy koa ny isan'ny mponina ary rehefa izany dia atao hoe "tsy-fiitarana".
Taham-piitarana demografika[hanova | hanova ny fango]
Amin'ny demografia, ny "taham-piitarana demografika" dia mamisavisa ny fiitaran'ny isan'ny mponina.
Fiitatry ny isam-ponina tao amin'ny Tantara[hanova | hanova ny fango]
Fiitatry ny isam-ponina manerana ny tany
Tamin'ny enina alina arivo taona talohan'i Jesoa Kristy hatramin'ny dimy arivo taona TJK, enina na valo tapitrisa teo ho eo ny isam-ponina. Niitatra ho zato tapitrisa izy tamin'ny taon'ny varahina ary roanjato tapitrisa izy teo amin'ny taona medievaly, nihamafy ny fiitatry ny isam-ponina tamin'ny taonjato faha 19 noho ny ezaka natao tamin'ny lafin'ny toe-karena ary tamin'ny lafin'ny fahasalamana. Ankehitrio, ny fiitaran'ny isan'ny mponina manerana ny tany dia efatra ambin'ny fitopolo tapitrisa tapitrisa isan-taona.
Ny fiitatry ny isan'ny mponina maneran-tany[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny taona enina sy roa arivo, ny taham-piitatra demografika manerana ny tany dia 1,14 isan-jato isan-taona. Noho izany, ny fiitaran'ny isan'ny mponina dia 203 800 isan'andro ary 74 tapitrisa manerana ny tany, in-efatry ny isan'ny mponin'i Madagasikara.
Nihanihena ny taham-piitatra demografika hatry ny taona 1970 ; ny taham-piitatra ngeza indrindra tamin'ny taonjato faharoapolo dia tamin'ny taona 1960 : tamin'izany fotoana izany ny taham-piitarana dia nahatratra ny 2,0% isan-taona. Ny fiitatry ny isan'ny mponina dia tsy hoe mitovy daholo manerana ny tany, fa miovaova arakaraky ny faritany sy ny firenena.
Mbola ambony ny taham-piitarana demografika eny amin'ny Afrika Sobsahariana ary any Azia Andrefana.
Efa miiba ny fiitaran'ny isan'ny mponina eny amin'ny firenena mandroso sasantsasany, any Eoropa Atsinanana sy any Eoropa andrefana ohatra.
Ny anton'ny tsy-fiitaran'ny isan'ny mponina any Afrika Atsimo dia ny fahafatesana vokatry ny SIDA
Afaka taona maromaro, hihena noho ny olona tsy miteraka intsony ny isan'ny mponina ao Japana sy any amin'ny firenena any Eoropa Atsinanana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiitatry_ny_isam-ponina&oldid=1011054"
Voaova farany tamin'ny 28 Aprily 2021 amin'ny 09:13 ity pejy ity.